Sheekofaneedda Cusub Ee Carabta Iyo Midabtakoorka Madowga (qaybta 2aad) - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Sheekofaneedda Cusub Ee Carabta Iyo Midabtakoorka Madowga (qaybta 2aad)
Sheekofaneedda Cusub Ee Carabta Iyo Midabtakoorka Madowga (qaybta 2aad)
Cunsuriyadda iyo midabtakoorku waa cudur ummadaha oo dhammi ay wadaagaan. Addoonsiga iyo ka ganacsiga dadkuna waa dhaqan fil weyn oo aysan jirin dhaqan, dhiig iyo diin ka badbaaday. Waxayna u badan tahay in ilbaxnimo kasta iyo ummad waliba ay wax addoonsatay iyadana la addoonsaday.
Tusaale ahaan, xeerarka qoran ee aadanuhu ay sameeyeen kuwa ugu da’ weyn waxaa ka mid ah midkii uu dejiyey boqorkii Baabilida ee Xamuuraabi sannadkii 1754 ee miilaadiga ka hor, qaanuunkaasna waxaa ku jira qodobbo ku saabsan addoonsiga.
Taas oo jirta, haddana si gaar ah waxaa la isugu sidkaa addoonnimada iyo gibilka madow, oo aalaaba waxaa isku macne la siiyaa labada eray ee madoobaanta iyo addoonnimada. Dad badanna waxay qabaan in madowgu tan iyo nebi Aadan ay addoon ahaayeen, ilaa qiyaamaha laga gaarayana ay addoon ahaan doonaan.
Taana waxaa ugu wacan in addoonsigii madowga lagula kacay uu ahaa kan ugu muddada dheer, uguna danbeeyey dhammaan addoonsiyadii tooska ahaa ee aadanuhu ay arkeen.
Yeelkadeede, tan iyo markii magaalada Miniyaabolis ee dalka Maraykanka uu askariga caddi ku dilay George Floyd, Maraykanka iyo meelo badan oo dunida ka mid ah waxaa ka xoogaysatay dood iyo dhaqdhaqaaq halkudhegga looga dhigay “Nolosha Madowgu Waa Muhiim” Black Lives Matter /حياة السود مهمة). Meelaha hadalhaynta dooddaasi ay ugu yar tahay waxaa ka mid ah waddamada carabta.
Sida la sheegayna carabtu marka ay leeyihiin “Nolosha madowgu waa muhiim”, madowga maankooda ku jiraa waa kan ku dhaqan Maraykanka iyo dhulalka galbeedka, maskaxdoodana kuma soo dhaco madowga ku dhaqan dhulalka carabta iyo Bariga Dhexe (=Iiraan, Israa’iil, Turkiga iyo meelo kale).
Haddaba, su’aalaha isweydiinta mudan waxaa ka mid ah: Waa maxay sababta maanka carabtu uu u xasuusto madowga waddamada galbeedka, laakiin uu u xusuusan waayey madowga carabta la nool? Ma duruufta madowga carabta ayaa ka wanaagsan tan madowga galbeedka, mase nolosha madowga maraykanka ayaa ka qiimo badan tan madowga carabta iyo Bariga Dhexe? Xaaladda carabta iyo madowga sow ku rumoobi mayso maahmaahda tiraahda: Maroodigu takarta saaran ma arkee maroodiga kale tan saaran buu arkaa?!
Hor iyo horraan, marka laga hadlayo addoonsiga iyo midabtakoorka carabta, taa macnaheedu ma aha in la leeyahay qof kasta oo carab ah ayaa midabtakoor yaqaan ama wax addoonsaday, waayo carabtu waa ummad ballaaran oo jaad walba leh, laakiin ulajeeddadu waa in la tilmaamo in dhaqankaasi uu bulshada ku dhex baahsan yahay. Taana carabtu waxay kala mid yihiin ummadaha kale, oo tusaale ahaan marka laga hadlayo addoonsiga iyo midabtakoorka reer galbeedka lagama wado in qof kasta oo reer galbeed ahi uu wax addoonsaday ama uu cunsuri yahay, laakiin waxaa la tibaaxayaa baahsanaanta cudurka oo keliya.
La soco qaybaha…..
WQ: Cabdisiciid Cabdi Ismaaciil
Previous article”Sababta Uu Imaaraadku Ugu mintidayo Somaliland!” – Warsidaha Israel ugu af dheer oo Faallo Ku Sharraxaya.
Next articleTrump wuxuu buuxinyaa booska banaan ee Maxkamadda Sare ugu dambeyn Sabtida!